Abantu bangakhuluma kanjani 'ngokuqwashisa' futhi ngesikhathi esifanayo basize ukugcina uhlelo? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-3 Julayi 2019	• 4 Amazwana
Uzwa abantu abaningi bekhuluma ngokuqaphela. Abanye bafuna i-guru; abanye bacabangisisa noma basebenzise i-yoga; abanye baya esontweni noma bahlanganyele ngendlela ethile yenkolo noma ingokomoya. Imfihlakalo enkulu ukuthi bangaki abantu abazama ukuhlanza umkhumbi wabo ngenkathi behamba emfuleni oholela elasha?
Ungakhuluma kanjani mayelana nokuqaphela uma nawekanyekanye usiza ukugcina uhlelo? Yisiphi isimiso? Uhlelo olusekelwe ngokuphelele ekunciphiseni ukuqonda; uhlelo esibuye sifingqa ngalo ngokuthi 'umphakathi'. Ungaqhubeka kanjani ukubamba iqhaza emncintiswaneni wokulinganisa lowo mphakathi; ukhulume ngokuqaphela futhi usebenzise zonke izinhlobo ezihlukahlukene zokomoya, kuyilapho umphakathi uchitha ukuqonda okuphelele? Akusikhathi yini ukubeka umkhumbi wakho emkhunjini ukuze uthole ukuthi kwenzekani?
Ngalesi singeniso ungase ucabange:Akukho okulungile! Ngingumkholwa noma ngingumuntu ongokomoya futhi ngisiza ukuthuthukisa umhlaba ngokusebenzisa leso simo sengqondo ekuphileni". Kodwa wena uvuka ekuseni ukuze usebenze ohlelweni olusekelwe ebugqilini nokuthembela kubaholi bezombusazwe ongase uke uvotela, bethemba ithimba elisha labaphangi lizokwenza ngcono kangcono ke lowo owedlule. "Kodwa ufuna ukuthi uVrijland akwenze? I-Anarchy? Angiyeke ukukhokha intela ngedwa futhi ngeke ngiyeke umsebenzi wami ngedwa. Ngabe ngilahlekelwa yizinto zonke noma ngithola isijeziso ngemali kanye nabasizi futhi ngingaxoshwa endlini yami futhi angisakwazi ukusekela umndeni wami".
Ngikhuluma nomuntu owachitha iminyaka engaba ngu-5 ejele laseTexas ngenxa yomphikisana webhizinisi nomkhiqizi owaziwa ngokuphrinta ngokuphathelene nokwephulwa kwelungelo lobunikazi. Ngaphandle kokuchaza lokhu ngokuningiliziwe, okuhlangenwe nakho kwakhe kulesi simiso sejele sekuthakazelisa ukuchaza ngokufishane lapha.
Le ndoda yathi empeleni kwakukhona uhlobo lwe-anarchy kuleli jele (ngeziboshwa eziyizinkulungwane ezimbalwa), lapho abalindi bebephoqelelwe khona ukuhambisana nemithetho engabhalwanga phakathi kweziboshwa ngokwabo. Uma befuna amanzi ashisayo, bangayenza lokhu ngokufaka umsebenzi ndawonye. Wabuye wabonisa ukuthi kwakungekho neze udlame, ngoba kwakukhona uhlobo lwekhodi yeqembu phakathi kwezizwe ezahlukene kanye nabadala bezizwe (abazenzele etilongweni). Leli fomu lokusebenzisana, kufaka phakathi amakhodi wokuziphatha, laqhubeka naphezu kokufika nokuhamba kweziboshwa.
Empeleni, wachaza umphakathi we-anarchist owawusebenza ngaphandle kwemithetho yesistimu yejele; naphezu kokuthi konke kwenzeka ngaphakathi kwezindonga zasejele. Le fomu ye-anarchist yayingeke isekelwe emithethweni nasemithethweni, kodwa ngokuhloniphana, izivumelwano kanye namandla okuxazulula izinhlanga ezahlukene. Uma othile eqoqweni engalungile, leli qembu lixazulula lokhu ngokukhuluma nomuntu. Eqinisweni, waqhathanisa nendlela lokhu kusebenza ngayo nezizwe zasendulo zaseNdiya; izizwe zaseNdiya ezaziyizakhamuzi zokuqala zaseMelika futhi zihlala ndawonye ngokuthula ngaphandle kwamaphoyisa, imithetho, izikole kanye namajele (kuze kufike uColumbus).
Eqinisweni, ijele elinjalo liyisibonelo esincane semphakathini, lapho sibonakala siphila khona ngokwengeziwe ejele ngaphandle kwemigoqo ebonakalayo. Ngeshwa, abaningi abakaqapheli lokhu, ngoba bona ngokwabo bayingxenye "yeqembu lezokuphepha". Abanye basebenza emfundweni, isibonelo, lapho izizukulwane ezintsha zabalindi ziqeqeshwa khona. 'Abaqaphi' Ngisho: isizukulwane esisha sabaphathi, abaqeqeshi, abaxhasi, abahloli bentela, amaphoyisa, amasosha, abacwaningi, abameli, njalonjalo njalonjalo. Abanye basebenzela uhulumeni, izinkampani zangasese ezihlangene, ukuhlinzeka ngezinsizakalo noma imikhiqizo kubahulumeni noma ohulumeni abancane. Abaningi basebenzisana ngokuzenzekelayo ngeso lengqondo noma ngamehlo amahora ngendlela efaka isandla ekuphathweni kwejele elijwayele ukubiza ngokuthi "umphakathi." Futhi lapho abantu abaningi abasebenza embhoshongweni ophakathi kwaleyo dome, nakakhulu kunomqondo wokubambisana esenza kahle kakhulu. Phela, emaqenjini okuphuza, amaqembu namaqembu, uhaqwe ngabantu abasebenza futhi ohlelweni.
Ngeshwa, isibonelo sejele laseT Texan sinamahloni kakhulu, ngoba isilinganiso seziboshwa kanye nabalindi lapho sasihluke kakhulu. Izinkulungwane zeziboshwa ezinogada ezimbalwa. Emphakathini wethu kukhona cishe abadali abaningi, abaqalisi nabalawuli bezimiso nemithetho nalabo abaye bathanda uhlelo oluzimele futhi isikhundla sabo kulo (ngoba bahlala ngokuphila kwabo nalo). Ukuvuvukala kwe-anarchist okuholela ekuziphatheni okuzikhandla kakhulu (njengoba kuchazwa yisiboshwa sangaphambili engangikhulume ngaso) kubonakala sengathi kuyinto engafakiwe. Umphakathi wethu ufana nalokho okwenzeka ngesikhathi sokuzama kukaStanford (Zimbardo) (funda lapha).
Noma kunjalo ungase uthi kukhona ithemba uma bonke labo bantu abahlanganyela enkolweni, engokomoya, yoga, gurus, njalonjalo, bathatha umkhumbi wabo ongokomoya owenziwe kahle ovela emfuleni (ogijima waya elasha). Noma ucabanga ukuthi ngeke kube khona ukulasha? Ucabanga ukuthi yindlela kuphela umphakathi ongasebenza ngayo; Kungabe kunjalo siyibona ibonakala? Uyaqaphela ukuthi sisuke sithuthela ngokwengeziwe emphakathini wamaphoyisa, lapho zonke izinhlobo zenkululeko zivinjelwe kakhulu futhi wonke umuntu kufanele adlale ngaphakathi kwemithetho nemithetho yezwe eqhubekayo elula kakhulu?
Uma abantu bekhathazekile kakhulu ngokuzizwa, kukhona i-undercurrent endaweni ethile engathanda into ehlukile. Kodwa-ke, abaningi bawela ithemba lamanga lenkolo futhi abaqapheli ukuthi inkolo efanayo inombono wokuthi 'uhlelo', okuhloswe ukudala ubumbano (polarity) emphakathini futhi okwamanje ukubamba ithemba lamanga lomsindisi njengososo . Le soseji iqinisekisa ukuthi abantu baqhubeka bethemba ushintsho, ngaphandle kokusebenzisa ulwazi lwabo. 'Vuselela' kungenzeka ukuthi akulona igama elilungile kulokhu. 'Ukuhweba kusuka' mhlawumbe incazelo engcono. Isikhathi esiphezulu sokuthi ungasaphathi nje i-cabin kanye nomkhumbi womkhumbi (ngezingokomoya, i-bikram yoga, ukuzindla noma umkhuleko), kodwa ukuthatha isisindo bese ususa umkhumbi kusukela emfuleni kusukela ohlelweni . Mhlawumbe kuyakhuthaza uma uthola ukuthi umfula empeleni uholela elasha.
Iningi lamasondo angokomoya alinika kuphela ama-wipes egumbini lakho lomkhumbi noma emphemeni, kepha akukhuthazi ukuba uthathe umkhumbi wakho emifuleni bese uya emanzini.
Kuyini ukuqonda noma kunjalo?
Kungaba usizo kulowo mongo ukwenza kuqala incazelo yokuqaphela. Isayensi nezinkampani ezifana ne-Google Alphabet zisebenzisa imali eningi nemali ekubalazweni kobuchopho bomuntu. I-CEO ye-Google uRay Kurzweil ukholelwa ngokuqinile ukuthi ukuqaphela kungumphumela we-neurons ekhanda lethu nokuthi yilesi isizathu esenza abantu bazihlukanise nezilwane ezincelisayo. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bane-neo-cortex futhi ngaleyo ndlela banamaseli angqondo obuchopho akwazi ukwakha ulwazi. Ngokuba isayensi nezinkampani ezinkulu zezobuchwepheshe, ukuqwashisa kungumphumela wokusebenza kobuchopho. Incazelo yami yokuqaphela iyinto ephikisayo: Ukuqaphela ukuthi lokho noma lokho ku-funstick eqhuba i-bio-avatar yomuntu.
Ukuze uqonde lokho, kufanele uqale uqonde ukuthi siphila ekumbumbulweni komdlali we-multi-player. Lokho kungase kuzwakale ngathi "ukuxoshwa ngokuphelele kuNkulunkulu'(crazy) ezindlebeni, kodwa hhayi ukukhathazeka; Kuyinto evumelana nabathengi nabasosayensi abavela ezinkampanini ezinkulu ezifanayo zobuchwepheshe ukukutshela ukuthi siphila ekufaniseni. Abantu abathanda u-Elon Musk bathanda ukwenza lokho (nangesizathu). Kodwa-ke, abakusho ukuthi siphila ekuboniseni okuqondile kakhulu kweLuciferian.
Uma ufunda uchungechunge lwama-athikili wami mayelana nokulingiswa, ungathola ukuthi i-quantum physics (uma ihunyushwa kahle futhi iqondwa) inikeza ubufakazi obuphelele bomqondo wokuthi siphila ekufaniseni. Nginikeza incazelo ebalulekile yalokhu lesi sihloko. Kuyasiza futhi kulowo mongo ukuya kwimenyu yale webhusayithi bese ukhetha into yemenyu 'ukulingiswa'.
"Ukuhlala" empeleni akuyona incazelo enhle. Asihlali 'ngokulinganisa: singaboni nabadlali. Singabantu, abahlezi embhedeni nomlawuli (noma 'injabulo' yesizukulwane esidala) futhi ubuke esikrinini esibheka kuso umdlali; umdlali / avatar ohlanganyela kulo mdlalo esibukweni. Imizimba yethu kuhlanganise nobuchopho yizi-avatars kule game multi-player. Sinayo i-AI (ama-avatars ahlakaniphile) ane-bio-ingqondo ecabanga kakhulu, inemizwelo futhi ingabheka izinketho, kodwa umdlali wangempela ungaphandle. Ama-avatars ethu, noma kunjalo, azizwa efana nempilo futhi ebonakalayo, njengezwe 'elibonakalayo' elizungezile.
Awutholi izitatimende ezingavamile? Akunjalo uma uqonda ukuhlolwa kwesibhamu ezimbili nge-physicist Niels Bohr, lapho kufakazelwa ukuthi udaba lukhona kuphela ekuboneni; njengoba nje isithombe esikrinini sakho se-Playstation TV sikhona kuphela uma uhambisa isilawuli sakho futhi ubheka leyo ngxenye yezwe nesikhathi emdlalweni.
Incazelo yokuqonda, ngokusekelwe kulokhu kuqondisisa, yilokhu: iqembu langaphandle elilawula umzimba wakho nobuchopho futhi kwenza izinqumo ocabanga ukuthi ubuchopho bakho buzithatha. Ukuqwashisa kuza ngoba umsebenzi wobuchopho futhi ngoba zonke izenzo. Ukuqaphela kungaphandle kweqiniso langempela. Ukuqaphela ukuthi ungubani. Uyazi; awuwona ubuchopho bakho noma umzimba wakho. Umzimba wakho uyingu-avatar kuphela kulokhu okufaniswayo.
Shintsha kusuka ekuzileni
Ngakho-ke, indlela yokuguqula kuphela ingabanjwa ezingeni le-consciousness. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthola umbono omuhle ukuthi uchaza kanjani iqiniso lethu. Ingabe uyaqonda ngempela ukuthi siphila kumlingisi we-multi-player we-Luciferian, uzobona ukuthi konke kwenziwa kusukela ekuqaphelweni nokuthi unelungelo lokuzikhethela ukubeka umkhumbi wakho ogwini futhi lokho kungashintsha. Kuyavunywa, kuyinkimbinkimbi ngoba kungenxa yokuthi kubonakala sengathi umakhi womdlalo ubonakala ngokucacile (Lucifer) ukuthi umbhalo ocacile kanye nabadlali (ama-avatars) emdlalweni okufanele abasize ukuqedela leyo script. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi abadlali abaningana bayeke ukudlala lo mdlalo ngokusho kulolo script.
Kukhona isizathu esenza sidlale lesi simulation. Yisiphi isizathu, ngizama ukuchaza ngaphakathi lesi sihloko, lapho ngiye ngazama ukuchaza ukuthi lokhu kulandiswa cishe kuyisimiso segciwane 'kwenkambu ye-quantum' noma yonke i-stem cell ehlanganisiwe yokuphila kwethu (i-stem cell noma ulwazi lokugeleza okuvela kuyo yonke into). Sicela ufunde leso sihloko ngokufishane.
Ngingathanda ukunikeza isicatshulwa kuleso sihloko lapha:
Ungase futhi uthi akudingeki sikhathazeke ngezinkinga ezikulesi siminganiso, akunjalo ngenhloso yesistimu yegciwane: ukunqoba nokulilungisa. Umzimba wakho ungasinda nokuhlasela kwegciwane. Indlela yakho yokwazi (umphefumulo noma noma yini ofuna ukuyibiza) ingasinda futhi ukuhlasela kwegciwane. Nokho, sicabanga ukuthi kufanele sikwenze lokho ku-Sims level level. Lokho cabanga Nokho, uqobo luyizinga le-SIM. Iyingxenye yaleyo gciwane lokulinganisa. Ukunqoba kwesimiso segciwane kwenziwa ngokuhlasela iseli legciwane. Akuveli ngaphakathi, kodwa kusuka ngaphandle. I-form Lucifer ifomu, okwakumelwe ukuhlola ezinye izinhlobo zokuqaphela amandla abo futhi okwakhiwa le gciwane lokulinganisa, ngakho-ke kufanele kulandelwe ezingeni lezinhlangano. Ngakho lokho kwenzeka ezingeni lokuqaphela.
Thatha izinyathelo zokukhonkolo
Iphikisana nayo yonke inzwa yethu yomuntu (avatar) (ukucabanga) ukwenza izinqumo ezizokwenza siphume ngaphandle kwesistimu. Kuphikisana nanoma yimuphi umqondo wokuphepha nokuphepha ukubeka umkhumbi ngasogwini. Ngemuva kwalokho, sicabanga ukuthi uma sihamba nokugeleza, singaqhubeka nokukhokha intela yethu noma indawo yokuboleka imali. Sicabanga ukuthi uma siyeka ukusebenza kuhlelo asikwazi ukusekela umndeni wethu futhi silahlekelwe yizinto zonke. Sicabanga ukuthi kufanele sixazulule ngokucabanga.
Kuphela uma sibuyisela ukulawula kwe-avatar yethu kanye 'nokunyakaza emdlalweni' kulabo abasezinkinobho, sizobona ukuthi banombono obala kakhulu womdlalo. Ucabanga ukuthi ubani ongenza izinqumo ezingcono: i-avatar kumdlalo we-Playstation uqobo noma umuntu olawula i-avatar?
Sekuyisikhathi sokuqala ukulalela ukwazi futhi kuthatha isenzo esivela kulokho kuqonda. Lokhu kungasho ukuthi kufanele ukhethe ukushintsha inkambo bese uthatha umkhumbi wakho emfuleni. Lokhu kusho ukuthi kufanele unqande ubuchopho bakho futhi ulalele ulwazi lwakho. Ukuzindla noma zonke izinhlobo zenye izindlela ezithulisa ukuthi kufanele ukwenze ukuthi uthathe umkhumbi wakho kusukela manje (oholela ekulahleni). Uma kungenjalo, khona-ke ulahlekelwe okuyizinto ezibalulekile futhi unomatasa nje ukuphoqa isondo lakho kanye nomkhumbi wemikhumbi. Umkhumbi wakho ohlanzekile ohlotshiswe ukuzindla noma i-yoga (njll) uzoqhubeka uhamba ngomkhumbi ukuya elasha.
Umoya, umphefumulo nomzimba: yilokho futhi yini umsebenzi wabo?
Yiziphi izilinganiso, yini ukuqonda, ukuthi iqiniso lethu lakhiwa kanjani nokuthi zingaki izilinganiso ezikhona?
Amathegi: avatar, izinga lokuqaphela, cabanga, afakiwe, umoya, ukholo, umzimba, umphakathi, ukuzindla, Inkolo, ukulingisa, ingokomoya, uhlelo, shintsha, yoga, umphefumulo
3 July 2019 ku-14: 34
Kwenzeka kanjani, lokho kulula ukuphendula okungukuthi, ukuzenzisa, ungabi naso emhlane futhi ukhethe indlela elula. Izinto ezenze i-madurodam enkulu ngokuhlala encane futhi uma izinto zibukeka zingalungile ekuqaleni, kusekhona i-giant elimhlophe ukufihla izinto nge. Ngoba izingadi, ama-hedges nama-dikes agcinwa kahle ..
Angazi umonakalo kusuka kuNkosana ..
3 July 2019 ku-18: 34
Abantu bayazi ngokungazi kahle ukuthi bahlala emphakathini ophazamiseke lapho kukhuthazwa khona ngezimbangela zemvelo. Bashintsha kakhulu ngangokunokwenzeka ngokusebenzisa isimo sikahulumeni futhi ngoba kuphephile ukuqhubeka nokuhlanganyela emhlambini wezinkomo. Ngokuqinisekile ungakubheka lokhu njengobuzenzisi. Ngezinye izikhathi isimo nesimo sokuziphatha njengemhlambi ayanele. Khona-ke ukukhathazeka / iziyaluyalu ziyaqeda. Ngenhlanhla, kukhona i-gurus, ukuzindla, njll, empeleni ayishintshi isimo esizifumana sona. I-Gurus ayigxile ohlelweni, ayijabule futhi ayicacile, ngakho wonke umuntu anganikeza incazelo yakhe ekukhoneni kwe-guru. Ukuzindla kungenye indlela yokususa isimo se-quo bese ubalekela kuso ngenzalo yakho. Ingabe lokhu konke kusebenza kahle kumadoda avela kwiskripthi. Akukaze kube yilokho okuhloswe ngakho futhi kuhlolwe uphenyo obhekene nesimo semvelo semvelo. Bayajabula kakhulu ukuthi kunezigurus, ukuzindla, njll ukuphazamisa umhlambi kubo. Futhi kuhle kakhulu emhlambini ngoba ikhanda labo alisuseli. Ngemuva kwalokho, baqhubeka behamba ngenhlambi. Akuyona into emangalisa ukuthi iningi labalandeli, abahlinzeki bokuzindla, njll banabantwana abasemlandweni weskripthi.
31 July 2019 ku-14: 54
UGeorge Kavassilas ukhuluma ngayo ngale ndlela: Unokuhleleka kwemvelo, i-hologram yawonkulunkulu, ne-hologram yezobuchwepheshe (theology sekulingisa phakathi kwezinye izinto)
Ngakho-ke utshela abantu abangene ngokuphelele emcabangweni wokulingisa ukuthi baxhumeke kule "hologram yezobuchwepheshe"
Kodwa-ke, iqiniso liwukuthi lokhu kungaphezu kokugqagqene futhi sikwazi ukuxhuma emnyeni wangempela wangempela okhona ngasikhathi sinye.
Ngingasho kanjani ukuthi:
Ungasho ukuthi kukhona amazinga amaningi wokulingisa. Ngokubona kwami, ukumbumbuluzwa kwe-luciferian kuphela nge-1 ephansi emcimbini.
"Ungqimba olubi lwe-luciferian" oludlala ezingeni lomhlaba, phakathi kwezinye izinto, futhi "ungqimba lwe-luciferian" oluyi-cosmic lufinyelela kude kakhulu.
Njengoba kunikezwe ukuthi konke okusendaweni ye-cosmic kulingiswa kusuka ekuhlelweni kwemvelo .. ukwakheka / ubukhulu, sikhona yini isizathu sokuthi kube neqiniso elisisekelo ngendlela le sekulingisa esebenza ngayo?
Ingabe ukumbondela kungasebenza kuphela nge "ngokoqobo"?
31 July 2019 ku-19: 32
Uma uqonda kahle incazelo ye-quantum-ngokomzimba uzophinda uqonde ukuthi igama elithi "ukumbumbuluza" alilona elokulinganisa futhi uzoqonda nokuthi umqondo wokuthi "ukuqagela kwe-holographic" awulungile (futhi ungasebenza ngokufanekisa kakhulu).
Singangeza zonke izinhlobo zamagama ... kusuka kuma-Wingmaker kuya eGeorge huppelepup noma ungazitholela logic emsulwa ngokwakho.
Manje usuyenza ibe yi-hodgepodge futhi nge-Luciferian ephansi ne-cosmic.
Lokho kuhlanganiswa kwazo zonke izinhlobo zemibono (ukumbumbuluzwa / i-hologram) kuyenza ibe yinkimbinkimbi futhi engokomoya. Kwakha Maze ngenkathi empeleni kulula ukubona konke. Ungafunda konke okwakho mayelana nezincwadi ezinkulu noma umane ukuqonde kukho konke ukwenza lula.
Ezihlokweni eziningana ngichaze ukuthi ungawakha kanjani amlinganiso kwizilinganiso. Kwesinye isikhathi kuhle ukufunda yonke into kuqala ngaphambi kokuphendula pf ukungafaki sandla ekwakheni i-maze.
« Isimo se-Dutchman esiphezulu sishonile: sinesibindi futhi asiqapheli
Ingabe u-Ursula von der Leyen (umongameli we-EU ozayo) empeleni wegazi elifanayo njengomndeni wasebukhosini waseBrithani? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.833.475